Dheecaanka Ku Jira Isgalka Lafaha |
Ciise Cabdullaahi — May 18, 2019
Waa dheecaan dareere ah oo adag oo aan lahayn midab kasoo ah mid ku jira dhammaan isgalka lafaha wuxuu caawiyaa dhaq-dhaqaaqa iyo is xoqa lafaha.
Dheecaankaan ku jira isgalka lafaha waxa ku dahaaran nooc ka mid ah carjawda jilicsan (smooth articular cartilage) kaasoo kala saara gododka uu ku jiro dheecaankaan loo yaqaano synovial fluids.
Isgalka (joints) waxa ku hareerysan dhex-diisa dheecaan, dheecaankaas waxa u dhexeeya xuub loo yaqaano synovial membrane.
Synovial membrane-ka waa xuub sal u ah dhammaan isgalka lafaha kaas soo u samaysan qaab kiish oo kale wuxuu masuul ka yahay in uu soo saaro dheecaanno caawiya isgalka lafaha dhaq-dhaqaaqooda iyo is xoqid in ay samayaan, xuubkaan wuxuu ka kooban yahay unugyo qaas ah oo loo yaqaano synoviocytes.
Carjawda jilicsan iyo dheecaankaan synovials fluid-ka waxay ka qayb qaadtaan in ay is xoqaan isgalka lafaha waxay hoos u dhigaan is xoqitaanka lafaha sidoo kale dheecaankaan wuxuu nafaqo siiyaa isgalka lafaha iyo carjawda ku wareegsan lafaha si ay uga qayb qaadtaan dhaq-dhaqaaq ka dhex-dhaco isgalka lafaha.
Dheecaankaan synovial fluids-ka waxa laga soo samayaa dhiigga gaar ahaan plasmaha, marka lagu sameeyo kala miirid (filtration) waxay kasoo gudbaan xuubka u dhexeeya isgalka lafaha.
Dheecaankaan wuxuu ka kooban yahay proteinases, collagenases, hyaluronic acid iyo lubricin.
Hyaluronic acid waxa laga soo daayaa unuga loo yaqaano fibroblast cell oo ku dhex-yaala xuubka unuga sidoo kale lubricin waxa laga soo daayaa unuga loo yaqaano chondrocytes.
Hyaluronic acid-ka shaqadiisa waxay tahay inuu dheecaankaan ka dhigo mid dheg-dheg ah oo jiid-jiidmaya halka lubricin shaqadiisa tahay in uu hoos u dhigo is xoqitaanka isgalka lafaha iyo sidoo kale in uu caawiyo koritaanka unugyada synovials-ka.
Waa maqaal kale oo lamid ah midkaan korre oo ku tusinaayo qaababka cilmiyeysan ee aad u qaadi karto dheecaanka lafaha.
Tags: Dheecaanka Ku Jira Isgalka Lafaha
Next post Dhiig Baxa Ku Imaado Hooyada Xiliga Ay Uurka Leedahay!
Previous post Sidee Loo Ogaan Karaa Da’da Ilmaha Kujira Caloosha Hooyada?